स्वास्थ्य पेज » स्वस्थ्य जीवनका लागि खानपानका यी १५ तरिका अपनाउनुहोस् ! स्वस्थ्य जीवनका लागि खानपानका यी १५ तरिका अपनाउनुहोस् ! – स्वास्थ्य पेज
स्वस्थ्य जीवनका लागि खानपानका यी १५ तरिका अपनाउनुहोस् !
लामो आयु बाँच्नेहरुले भन्ने गरेका छन्, थोरै खाउँ, धेरै बाँच । हाम्रा धर्मशास्त्रहरुमा उल्लेख छ, अल्पहारी हुनुपर्छ । अर्थात धेरै खानेकुरा खाने मानिस रोगी र चाँडो बुढो हुन्छ । यो तथ्य त विज्ञानले समेत पुष्टि गरिसकेको छ ।
यी सबैको निष्कर्ष के भने, शारीरिक स्वास्थ्यका लागि खाना अनिवार्य आवश्यक्ता हो । तर, त्यही खाना सही र सन्तुलित ढंगले खान जानिएन भने, त्यही रोगको जड बन्छ ।
स्वस्थ खाना खानको लागि अपनाउनुपर्ने १५ सजिला तरिका: